Upright Freezer/Cooler Glass Door Vagadziri uye Suppliers - Wholesale Upright Freezer/Cooler Glass Door Suppliers
PVC Frame Mini Fridge Girazi Door
YB PVC Frame Mini Fridge Glass Door iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakanyungudutswa rakadzikama Low-E, iro rinopesana nekudhumhana, rinoputika-risingaputika nekuoma kwegirazi remhepo. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB PVC Frame Mini Fridge Glass Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃-10 ℃, iyo gasket ine simba remagineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.
Rose Goridhe Girazi Door
YB Rose Goridhe Girazi Door iri kushandisa yakakwidziridzwa inoyangarara yakadzikama Low-E girazi, inodzivirira kudhumhana, inoputika-inoratidza kuomarara kwemotikari windshield. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB Rose Goridhe Girazi Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃-10 ℃, iyo gasket ine simba remagineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.
Yakarurama Chinwiwa Inotonhorera Girazi Door
YB Upright Beverage Cooler Glass Door iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakayangarara rakanyoroveswa Low-E, iro rinopesana nekudhumhana, risingaputike nekuoma kwegirazi remhepo. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB Yakarurama Chinwiwa Inotonhorera Girazi Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva pa0 ℃-10 ℃, iyo gasket ine simba remagineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.
Beverage Cooler Girazi Door
YB Beverage Cooler Glass Door iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakanyungudutswa rakadzikama Low-E, iro rinopesana nekudhumhana, risingaputike nekuoma kwehwindisheni yemotokari. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB chinwiwa chinotonhorera girazi gonhi chinogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva 0 ℃-10 ℃, iyo gasket ine simba remagineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Yakavakirwa-mukati, Yekuwedzera, Yakazara refu kana yakagadziridzwa mubato inogona zvakare kuve inoyevedza poindi.
YB Beverage Mini Fridge Glass Door iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakanyungudutswa rakadzikama Low-E, iro rinopesana nekudhumhana, rinoputika-risingaputika nekuoma kwegirazi remhepo. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB Beverage Mini Fridge Glass Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva 0 ℃-10 ℃, iyo gasket ine yakasimba magineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.
Black Frame Firiji Girazi Door
YB Nhema Frame Firiji Girazi Door iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakanyungudutswa rakadzika-E, iro rinopesana nekudhumhana, rinoputika-risingaputika nekuoma kwegirazi remhepo. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB Nhema Frame Firiji Girazi Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃-10 ℃, iyo gasket ine yakasimba magineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.
Yakapenya Sirivha Girazi Door
YB Bright Sliver Glass Door iri kushandisa girazi rakakwidziridzwa rakakwidziridzwa Low-E girazi, rinopesana nekudhumhana, risingaputike nekuoma kwegirazi remhepo. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB Bright Sliver Glass Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva -30 ℃-10 ℃, iyo gasket ine simba remagineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.